Tube-ga Lipstick-ga & Shirkadaha Tube-ka ee Gloss Gloss | Shiinaha Lipstick Tube & Soosaarayaasha Tube Butros Gloss Dibno
Custom sameeyey 50g cream dhaxan ...
Mashiin fudud oo cadarka xoqida ...
Factory raaxo caadadii caadadii ...
Bot bot oil saliida jumlada ...
Midabada midabada badan leh ee poli ...
Haddii tuubada lipstick-ka iyo tubbada dhalaalaya bushimaha ay yihiin waxa aad raadineyso markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. At Nantong Global Packaging Products Co., Ltd. waxaan, halkaan kuugu soo bandhigeynaa ururinta ballaaran ee tuubooyin qurux badan oo loo isticmaali karo baakadaha lipstick iyo bushimaha gloss.
Tiro aad u tiro badan oo ah tuubooyinka lipstick-ka iyo tuubooyinka dhalaalaya bushimaha oo leh waxyaabo kala duwan, sida ABS, PP, PS, AS, PETG, galaas iyo aluminium. Shuruudaha macaamilka ee ku saabsan cabirka, awoodaha, midabada, qalabka iyo naqshadaha waa la soo dhaweynayaa. Teknolojiyada dusha sare waxaa ka mid ah ku buufinta, koronto siinta, uumiga, xardho laser, inlay, iwm. Qayilo for habka daaweynta dusha aluminium. Daabacaadda sawirka waxay leedahay daabacaadda shaashadda, shaabadaynta, daabacadda suufka, daabacaadda wareejinta kuleylka, iwm. Calaamadaha waraaqaha, daabacaadda ama waraaqaha caagga ah ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Waxaan leenahay xakameyn tayo leh oo adag marka aan soo saareyno. Kooxda xirfadeed waxay ka shaqeeyaan naqshadeynta, horumarka, soo saarista, uruurinta, xirxirida iyo rarka. Ka dib adeegga iibka, haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan tayada, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa beddelka tirada cilladaysan. Muunado aan lahayn astaan ​​gaar ah oo bilaash ah, haddii aad aqbali karto xamuulka la qaaday. Haddii aad rabto calaamadda kartoo, waxaan kaa qaadi doonaa kharashka shaqada iyo kharashka khadadka. Sidoo kale xamuulku wuxuu ku jiri doonaa koontadaada.
Waxaan qabannaa mabda'a ah "macaamilka marka hore, tayada marka hore" si aan u qancino macaamiisha shuruudo badan. Ka ganacsadayaasha jumlada ah iyo soosaarayaasha tuubada lipstick-ka iyo tuubada muraayadaha bushimaha, waxaad NTGP ka heli kartaa qiimaha ugu fiican ee laga heli karo suuqa. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad amar buuxa na siisid hada adigoon wax shaki ah kajirin. Goynta taabashada wanaagsan iyo qaabeynta cajiibka ah waxay ku dari kartaa muuqaalka tuubooyinkaaga waxayna kordhin kartaa iibkaaga.
Tilmaam yar, haddii aad leedahay kaliya smidgen oo lipstick ah oo ku hartay tuubbada, ku qas qashinka batroolka oo u isticmaal sida dhalaalka bushimaha.
Naqshad cusub oo qaab madhan faaruq ah tubbada lipstick-ga
Tuubada lipstick-ka qaabka kulul, qalabka baakadaha dhalada lagu xidho
Weelka tuubada qashin-qubka ah ee qurxinta quruxda badan ee alaabada iibinta kulul
Square midabo biraha kartoo midabada biibiile tubbada
Baakadaha qurxinta midabka u gaarka ah ee weelka tuubbada yar-yar
Baakadaha tuunbada macmalka ah ee qiimaha hooseeya weel caag ah oo faruuryo faaruq ah
High-dhamaadka xarrago leh kartoo madhan lipgloss bushimaha dhalaalaya
Iibinta kulul caadadii madhan weelasha tuubbada lipgloss cad oo burush leh
Qaab fudud oo caag ah oo caag ah oo caag ah oo la isku qurxiyo oo tubbada lipgloss madhan ah
Baakadaha caagga ah ee balaastigga ah ee balaastigga ah oo madhan oo cusub oo leh mashiinka burushka
Wareeg xirmada kiishka lipgloss madhan ee caadada ah
Dahab cad oo dahab madhan oo baakadaha tuubooyinka dareeraha ah